တရုတ်-လာအို ရထားလမ်း မှတစ်ဆင့် လာအိုနိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ဝန်ဆောင်မှုကွန်ရက်များချိတ်ဆက် - Xinhua News Agency
ကူမင်း၊ ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အအေးခန်း ကွန်တိန်နာ ၃၃ လုံး တင်ဆောင်ထားသည့် ရထားတစ်စင်းသည် တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း ယူနန်ပြည်နယ် မြို့တော် ကူမင်းမြို့မှ လာအိုနိုင်ငံသို့ ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်တွင် စတင် ထွက်ခွါခဲ့သည်။
၎င်းမှာ အရည်အသွေးမြင့်မားသည့် ရပ်ဝန်းနှင့်ပိုးလမ်းမ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ၏ အထင်ကရစီမံကိန်း တစ်ခုဖြစ်သော ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်က စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် ၁,၀၃၅ ကီလိုမီတာ အရှည်ရှိ တရုတ်-လာအို ရထားလမ်းပေါ်တွင် အအေးခန်း- ကွင်းစက် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး ပထမဆုံးရထားပြေးဆွဲမှုဖြစ်သည်။
ရထားပေါ်တွင် ယူနန်ပြည်နယ်၏ အထူးဒေသထွက် အသီးအနှံများကိုတင်ဆောင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လာအိုနိုင်ငံမြို့တော် ဗီယန်ကျင်းမြို့သို့ ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက် တွင် ရောက်ရှိခဲ့သည်။
လာအိုနိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံမှ အထူးကုန်စည်များကိုလည်း ကူမင်းနိုင်ငံ Tengjun နိုင်ငံတကာ ကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်း သို့ ပြန်လည် ပို့ဆောင်မည်ဖြစ်ရာ ရှန်ဟိုင်း၊ ကွမ်ကျိုးနှင့် ပေကျင်းမြို့များသို့ ထပ်မံ ပို့ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်းမှ သိရသည်။
ကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်း အား လာအိုနိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ဝန်ဆောင်မှုကွန်ရက်များချိတ် ဆက်ရန် တည်ထောင်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းပြည်ပ ကုန်သေတ္တာများကို စုဆောင်းခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကုန်စည်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်း၊ အကောက်ခွန်ကင်းလွတ်ခြင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံမှ ကုန်စည်များကို တင်ပို့ခြင်းနှင့် လာအိုနိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံမှ ကုန်စည်များကို တင်သွင်းခြင်း များတွင် သယ်ယူခြင်းနှင့် ပို့ဆောင်ခြင်း စသည့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။
တရုတ်-လာအို ရထားလမ်းသည် တရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်း ယူနန်ပြည်နယ် ကူမင်းမြို့နှင့် လာအိုနိုင်ငံ ဗီယန်ကျင်းမြို့တို့ကို ချိတ်ဆက်ပြေးဆွဲခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာ နှစ်နိုင်ငံမှ ပူးတွဲ တည်ဆောက် အကောင်အထည်ဖော်သည့် ပထမဆုံးပြည်ပ ရထားလမ်းဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ၏ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ ဖောက်လုပ်ခြင်းဖြစ်ကာ တရုတ်နိုင်ငံ ရထားလမ်းကွန်ရက်နှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပြေးဆွဲသည့် ရထားလမ်းလည်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ (Xinhua)
KUNMING, Dec.4(Xinhua) — A train carrying 33 refrigerated containers left Kunming, capital of southwest China’s Yunnan Province, for Laos Saturday.
The China-Laos Railway connects Kunming in southwest China’s Yunnan Province with the Lao capital, Vientiane. It is the first overseas railway jointly constructed and operated by the two countries, adopting Chinese standards, and directly linking to China’s railway network. Enditem